Kuvhurwa kuzere kwemiganhu yeUS kune vachengeti vakazara vashanyi kwenguva yakareba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Kuvhurwa kuzere kwemiganhu yeUS kune vachengeti vakazara vashanyi kwenguva yakareba
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kuvhurwa kuzere kwekushanya kwenyika dzese kuenda kuUnited States kune vanhu vakazara vaccinate kwadarika uye kuchapa hupfumi kuUS hupfumi, mabhizimusi ekufamba makuru uye madiki, uye kunzvimbo dzekuAmerica.
Vavhoti vakazara vachabvumidzwa kupinda muUS kuburikidza nekuyambuka muganho wepasi kutanga kutanga kwaMbudzi.
Iwo maCentre for Disease Control and Prevention haasati aona kuti ndeapi majekiseni anozogamuchirwa neUS.
Zuva chairo rinobviswa zvirambidzo zvekufamba richaziviswa "munguva pfupi".
Vakuru vehutungamiriri veUS vakazivisa kuti kutanga kutanga kwemwedzi unouya, US Dhipatimendi reHomeland Security ichabvumidza vashanyi vakabaiwa jekiseni rakazara kurwisa coronavirus kubva kune zvisingakoshe zvirango zvekufamba zvirikuitika parizvino pamiganhu yenyika mbiri dzeUS.
Mitemo, iyo ichaziviswa zviri pamutemo nemunyori wezvekudzivirirwa kwenyika, Alejandro Mayorkas nhasi, ichafukidza miganhu yepasi uye kuyambuka ngarava. Ivo vakafanana asi havana kufanana nezvinodiwa zvakarongwa zvakaziviswa mwedzi wapfuura kune vanofamba nendege dzenyika dzese, vakuru vakadaro.
Zuva chairo kutanga kwaNovember apo izvo zvibvumirano zvichabviswa zvichaziviswa "munguva pfupi," akadaro mumwe wevakuru veUS.
Tsika dzeUS uye Border Kudzivirirwa vanobvuma mapepa kana humbowo hwedigital hwekudzivirira, vakadaro vakuru veUS. Iyo Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haasati aona kuti ndeapi majekiseni anozobvunzwa neUS, vakuru vakawedzera.
US Travel Association yakaburitsa chirevo chinotevera pachiziviso chekuti zvirambidzo zvekufamba kwenyika yeUS muganhu neCanada neMexico zvichasimudzwa kune vanhu vakabaiwa majekiseni:
"US Travel yakagara ichikurudzira kuvhurwa kwemuganhu wepasi weU.S., uye tinorumbidza hurongwa hwehutungamiriri hweBiden hwekurerutsa zvirambidzo zvevashanyi vanobayiwa jekiseni. Ichi chiito chinounza kukwidziridzwa kwekugamuchirwa mukufamba kubva kune edu maviri epamusoro misika sosi yekufamba mukati.
“Kuderera kwekushanyirwa kwenyika dzese kubva kutanga kwechirwere kwakakonzera mari inodarika mabhiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora pakarasika mari yekutengesa kunze kwenyika uye inodarika miriyoni yemabasa eUS. Iyo yakavharwa yeCanada neMexico miganhu yenyika inodhura hupfumi hweUS ingangoita $ 250 miriyoni pamwedzi.
"Kuvhurwa kuzere kwekushanya kwenyika dzese kuUnited States kune vakabaiwa zvakakwana kwadarika uye kuchapa hupfumi hweUS, mabhizinesi ekufambisa makuru nemadiki, uye kunzvimbo dzakapoterera America."